Akụkọ - ọnọdụ ahịa ụlọ ọrụ polylactic acid (PLA) na nyocha atụmanya mmepe na 2020, atụmanya ngwa sara mbara na mgbasawanye nke ike mmepụta.
Global polylactic acid (PLA) ọnọdụ ahịa ụlọ ọrụ na nyocha atụmanya mmepe na 2020, atụmanya ngwa sara mbara na mgbasawanye nke ike mmepụta
Polylactic acid (PLA) bụ ụdị ihe ọhụrụ sitere na bio, nke a na-ejikarị na-arụpụta uwe, ihe owuwu, ahụike na ahụike yana mpaghara ndị ọzọ. N'ihe gbasara ọkọnọ, ikike mmepụta polylactic acid zuru ụwa ọnụ ga -abụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ tọn 400,000 na 2020. Ka ọ dị ugbu a, Nature Works nke United States bụ onye kacha emepụta ihe n'ụwa, nwere ikike mmepụta 40%;
Mmepụta nke polylactic acid na mba m ka dị obere. N'ihe banyere mkpa, na 2019, ahịa polylactic acid zuru ụwa ọnụ eruola nde dollar 660.8. A na-atụ anya na ahịa ụwa ga-ejigide nkezi ngwakọta ngwakọta kwa afọ nke 7.5% n'ime oge 2021-2026.
1. Atụmanya ngwa nke polylactic acid sara mbara
Polylactic acid (PLA) bụ ụdị ihe ọhụrụ sitere na bio nke nwere ezigbo ịdị ndụ, biocompatibility, nkwụsi ike ọkụ, nguzogide mgbaze na nhazi dị mfe. A na -ejikarị ya n'ichepụta uwe, ihe owuwu, na nlekọta ahụike na ahụike yana akpa akpa tii. Ọ bụ otu n'ime ngwa izizi nke bayoloji sịntetik n'ọhịa ihe
2. N'afọ 2020, ikike mmepụta polylactic acid zuru ụwa ọnụ ga -abụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ tọn 400,000
Ka ọ dị ugbu a, dị ka ihe na-eme ka ihe ndị dị ndụ na gburugburu ebe obibi, polylactic acid nwere atụmanya ngwa dị mma, ikike mmepụta ụwa na-aga n'ihu na-abawanye. Dị ka ọnụ ọgụgụ sitere na European Bioplastics Association si kwuo, na 2019, ikike mmepụta polylactic acid zuru ụwa ọnụ bụ ihe dịka tọn 271,300; na 2020, ikike mmepụta ga -abawanye na tọn 394,800.
3. United States “Nature Works” bụ onye kacha emepụta ihe n'ụwa
Site n'echiche nke ike imepụta, Nature Works nke United States bụ ugbu a nnukwu onye nrụpụta polylactic acid n'ụwa. N'afọ 2020, ọ nwere ikike mmepụta kwa afọ nke tọn polylactic 160,000, na -ewe ihe dịka 41% nke ikike mmepụta ụwa niile, Total Corbion nke Netherlands sochiri. Ike mmepụta bụ tọn 75,000, ikike imepụta ihe ruru 19%.
Na obodo m, mmepụta nke polylactic acid ka na -amalite amalite. Enweghị ọtụtụ ahịrị mmepụta nke arụgoro ma tinye n'ọrụ, na ọtụtụ n'ime ha pere mpe. Ndị isi ụlọ ọrụ na -emepụta ihe gụnyere Jilin COFCO, Hisun Bio, wdg, ebe Jindan Technology na Anhui Fengyuan Group Ike mmepụta nke ụlọ ọrụ dịka Guangdong Kingfa Technology ka na -ewu ma ọ bụ na -eme atụmatụ.
4. 2021-2026: Onu ogugu onu ogugu onu ogugu kwa afo nke ahia a ga eru 7.5%
Dị ka ụdị ihe ọhụrụ na-emebi emebi na gburugburu ebe obibi, a na-egosipụta polylactic acid site na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na-eme gburugburu ebe obibi, nchekwa na anaghị egbu egbu, ma nwee atụmanya ngwa ngwa. Dabere na ọnụ ọgụgụ sitere na ReportLinker, na 2019, ahịa polylactic acid zuru ụwa ọnụ eruola nde $ 660.8. Dabere na atụmanya ngwa ngwa ya, ahịa ahụ ga-ejigide nkezi ngwakọta ngwa ngwa kwa afọ nke 7.5% n'ime oge 2021-2026, ruo 2026., Ahịa polylactic acid (PLA) zuru ụwa ọnụ ga-eru ijeri dollar 1.1.
Zhejiang Tiantai Jierong New Material Co., Ltd. gbara mbọ itinye pla na ụlọ ọrụ akpa tii, na-enye ndị ọrụ ụdị akpa na-adịghị egbu egbu, na-enweghị isi na nke na-emebi emebi maka ahụmịhe mmanya tii dị iche.